NGUBANI OWADLALA I-EMPEROR PALPATINE YOQOBO KWI 'STAR WARS'? - IINDABA
Ngubani owadlala i-Emperor Palpatine yoqobo kwi 'Star Wars'?
Abathandi ababukele ngokukodwa i-Star Wars trilogy ekhethekileyo kwiDVD okanye amaqonga okusasaza abayi kuqaphela ukuba umlingisi u-Ian McDiarmid wayengenguye yedwa umdlali odlala i-Emperor kwi-The Empire Strikes Back. Nangona kuyi nyaniso ukuba waziswa ukuba adlale umsebenzi kwi-trilogy yokugqibela yokugqibela, Ukubuya kweJedi, yayingumdlali oyingqayizivele ngokupheleleyo owayecelwa ukuba adlale uMlawuli kwi-Empire Strikes Back. Ngokwenyani, yayingengomdlali weqonga nangayiphi na indlela… yayingumdlali weqonga.
Kwindlela yokunciphisa yeqonga eyahlukileyo yoBukhosi obuGadlileyo, inxalenye ye-Emperor Palpatine yenziwa yintombazana. Yayingumdlali weqonga obhinqileyo owabonwa embonisweni. Kuyavunywa, umdlali weqonga wabonwa phantsi kobuso obunzima kunye neziphumo ezithile, kwaye imovie yokugqibela yayinelizwi lendoda elitshitshisa ngokusebenza komdlali weqonga. Loo mdlali wayenguMarjorie Eaton, kunye nomsebenzi wakhe we-Star Wars kwindalo yonke awuzange uqondwe ngabalandeli abaninzi be-Star Wars ngezizathu ezi-2. Okokuqala, isihloko sakhe besingadweliswanga kwikhredithi yemuvi (nangona kunjalo Iphepha le-IMDB le-Eaton uyayivuma indlela yakhe engalunganga kwimidlalo bhanyabhanya). Okwesibini, ekugqibeleni watshintshwa kwimiboniso bhanyabhanya kamva, emva kokuba etshintshelwe u-Ian McDiarmid emva koLucas ukuya kuthi ga ngoku kwimiboniso bhanyabhanya yakhe yokuqaliswa kweDVD. ngo-2004 . Nantsi into ekufuneka uyifundile malunga negalelo likaMarjorie Eaton kwindalo iphela ye-Star Wars.
Uye phi u laura bannon
Umlingisi uMarjorie Eaton udlale i-Emperor 'kwi-Empire Strikes Back' (Kodwa omnye umlingisi ebonelele ngelizwi)
Ubukhosi buBuya umva-uMlawuli owahlukileyo ukusukela ngo-1980Lo ngumlawuli owahlukileyo, uvakaliswe nguClive Revill. UMarjorie Eaton bubuso boMlawuli. U-Elaine Baker wadunyiswa ixesha elide njengobuso be-Emperor, nangona kunjalo enyanisweni, wayejonga iifoto zomsebenzi, kwaye imodeli yokugqibela yayingu-Eaton. Le yimodeli KUPHELA eyakhe yabonwa kwimidlalo yeqonga, kunye ne…2006-09-07T04: 56: 19Z
Kwisiqeshana esingentla, unokubona imodeli eyahlukileyo yoBukhosi obuGadla ngasemva ukuba ukhethe uMlawuli. Lo mlawuli unobuso obude kunye ne-angular eyongezelelweyo kune-Ian McDiarmid imodeli yomlingiswa. Ukhetho olwahlukileyo luka-1980 lucutha ukhetho lomlingisi uMarjorie Eaton phantsi kobuso obunzima njengo-Emperor okhohlakeleyo. Nangona kunjalo, ayililo ilizwi lakhe eliviwe kwisiqeshana esingentla. Ilizwi lika-Emperor ngo-1980 unciphise i-Empire Strikes Back yayingumdlali weqonga Clive Ukuhlaziya , Othe wavakala ngelizwi u-Alfred Pennyworth kwi-Batman: I-Animated Series. IMDB amanqaku i-Revill inokuqatshelwa kwindima kuzo zonke izihloko zomdlalo we-Intanethi.
Ukhetho lokuba no-Revill overdub Eeaton wayengekho ngokuchaseneyo nenye indlela uGeorge Lucas ayenze ukuba enze umlingisi uDavid Prowse njengesixhobo esikrinini uDarth Vader kwi-trilogy eyahlukileyo, nangona kunjalo eneengxaki zakhe igqithisile NguJames Earl Jones.
Ngaphandle kokubonisa kwifilimu yokuqala ye-Star Wars, ubukho be-Emperor engendawo babungavakali ukuboniswa kwasekuqaleni kwe-trilogy. Uhlobo lwe-Emperor lukhankanyiwe nguGrand Moff Tarkin kunye noMlawuli weTagge kwiThemba elitsha, nangona kunjalo umlinganiswa akazange abonakale kwiscreen de uBukhosi buGadle. Ekubonakaleni kwakhe kwangaphambili, uMlawuli ubonwa njengengqikelelo yehologram kuphela, kwindawo emfutshane kunye neVader. Kwakungekho kude kubuyiswe iJedi ukuba umlingiswa wabonwa enyameni. Nangona kunjalo, xa i-trilogy ekhethekileyo ye-Star Wars yayisexesheni ngokusungulwa kwayo kwe-DVD ka-2004, ilifa lomlingisi owahlukileyo wePalpatine lalifihliwe. U-Lucas ukhethe ukufaka endaweni yedijithali ukusebenza ngokukuko kwe-theatrical minimise ye-Empire Strikes Back ukulungiselela ukumiliselwa kwe-DVD, edibanisa uninzi lwee-Special Edition ezongezwe kwimiboniso bhanyabhanya ekhethekileyo, kunye nokuhlelwa kokusebenzisa ukufana kukaMcDiarmid kwi-Empire Strikes Back.
Ngoku ka UMagazini woBukhosi , Ukuphehlelelwa kweDVD ngo-2004 kuphawulwe okokuqala u-Ian McDiarmid ehlelwe kwi-The Empire Strikes Back. Nangona kunjalo, lo mahluko wawungathandwa kwindalo iphela ngabalandeli beStar Wars. Enyanisweni, umbhali omnye ScreenCrush waya kufikelela kutshintsho lwe-Eaton ye-McDiarmid kwi-2004 njengotshintsho olubi kakhulu emva kokukhutshwa kuzo zonke 'ii-Star Wars'. Kule ngxelo, bubuso bukaMcDiarmid, kwaye ayikaze ibe ye-Eaton, ebonakala ngathi yi-Emperor ekunciphiseni i-Empire Strike Back okwangoku isasaza kwiDisney +.
UMarjorie Eaton kunye no-Elaine Baker bobabini baqinisekisiwe njengo-Emperor kule minyaka idlulileyo
Ngubani uMarjorie Eaton? Wayesisiseko somntu kwi-quintet yemizamo yokwenza i-Emperor ekhethekileyo (kunye nenkulu) #Idabi leenkwenkwezi Wayenxibe iimaski eziqingqiweyo nguPhil Tippet, esetyenziswa nguRick Baker, w / amehlo e-chimpanzee, kwaye wavakaliswa nguClive Revil ngempembelelo ebandayo. pic.twitter.com/S18HJMISZ5
-UJames H. Dargie (@JHDargie) Ngomhla wamashumi amabini ananye ku-Matshi 2021
Imiba entsonkothileyo yinto eqinisekisiweyo yokuba enye intombazana, u-Elaine Baker, wayexhalabile kulungiselelo loMlawuli owahlukileyo, kwaye kule minyaka idlulileyo, kukhangeleka ngathi u-Baker no-Eaton bathenga bedidekile ezingqondweni zabantu. Ngelixa u-Baker engabonakali kwimiboniso bhanyabhanya yokugqibela, wayesetyenziselwa ukukhangela amahlumelo okwenziwa kwe-Emperor. Ngoku ka Wookieepedia , Isiphithiphithi savela xa uBaker, kwaye engazange uEaton, atyholwa njengomdlali weqonga emva komlawuli kwincwadi ye-ebook ethi The Making of the Empire Strikes Back.
Nangona kunjalo, umsonto ku-Twitter ubonakala uqinisekisa ukuba i-ebook yayiyimpazamo, kwaye i-Eaton yayingumdlali weqonga owayevela kwi-movie yokugqibela. Umsonto we-Twitter ( zigcinwe apha ) iqulethe incoko yababini phakathi komsebenzi waseLucasfilm uPablo Hildalgo kunye nomculi Intaka yeBrandon . Kwintengiso yabo kuTwitter, intaka ibuza uHildalgo ukuba ingaba yayinguEaton okanye uBaker ekugqibeleni owabonakala kwi-Empire Strikes Back. U-Hildago uyaphendula ayizukuba ngu-Elaine Baker kwifilimu ebonakala ngathi ayibonisi ukuba uMarjorie Eaton ngumdlali weqonga kwi-Empire eyothusayo. Urhwebo olufanayo luye lucacise ukuba ngubani ophendulayo kwisoftware kaMhlekazi ye-Eaton. Ngokwe-tweet kaHildago, i-prosthetic yayisetyenziswa nguRick Baker, nangona kunjalo oqingqiweyo ngokwenene nguPhil Tippett.
Ukongeza ekusebenzeni kwakhe njengo-Emperor, i-Eaton inokuqatshelwa ngomsebenzi wakhe kwiimovie ezininzi ezaziwayo. Uvele kuMary Poppins njengo-Miss Persimmon, nakwinto encinci, engavunyelwanga eSteve McQueen IBullitt . Ukujongwa kwakhe okwethutyana kwi-The Empire Strikes Back yenye yeendima zakhe zokugqibela kumdlalo bhanyabhanya. Inqaku lakhe lokugqibela letyala kwi-IMDB yayingo-1984, kumdlalo bhanyabhanya ohlekisayo wolwaphulo-mthetho Abaqhekezi . Yonke le nto ithethwayo, ngelixa i-Eaton ine-TV kunye nomdlalo bhanyabhanya kwikhredithi yakhe, wayephakame kakhulu ekubhekiswa kuye njengomzobi. Ngokwe- Igalari yezobumnini , eyayibonisa ezimbalwa zomsebenzi wakhe Ngo-2019 , I-Eaton yazuza udumo ngomsebenzi wamanje wamandulo ngezintlobo zobugorha kunye nemibala eyomeleleyo nefuthe le-cubist.
U-dunkin ugcina iitalente zaseMelika
Ngubani omnye odlale iPalpatine kwi 'Star Wars' Universe?
I-VALERIE MACON / AFP ngokusebenzisa imifanekiso ka-Getty - David Livingston / Getty IzithombeAbadlali uIan McDiarmid kunye no-Ian Abercrombie, owenza nganye iPalpatine.
Ukusukela ukubonakala kukaMarjorie Eaton okwethutyana njengoKumkani owahlukileyo, inani labadlali abohlukeneyo bavakalise okanye babonisa umlinganiswa kule minyaka idlulileyo. Kwingxelo kaHeavy yomdlali weqonga u-Ian Abercrombie Isizathu sokubhubha, kwakudume ukuba abadlali ababini ogama linguIan baziwa ngokuthatha inxaxheba ePalpatine. I-Abercrombie ngokuqinisekileyo iyaziwa kancinci, ivakalise umlingiswa kwimidlalo yevidiyo embalwa kunye nokulandelelana kweClone Wars. U-Ian owahlukileyo, umlingisi u-Ian McDiarmid, uthathe inxaxheba kwi-Emperor / Palpatine / Darth Sidious ebonisiweyo iminyaka emininzi. Umdlali weqonga wavela okokuqala Ukubuya kweJedi, kwaye kamva wenza umsebenzi kwakhona kwii-prequels, ukongeza kwi-2019's Rise of Skywalker.
pauly d intombi mama
Ukubuyela kwakhe emsebenzini kwi-2019 yayingekothusi konke, kwimeko yokuba umdlali weqonga wayeye kwingxelo kwiminyaka emibini eyadlulayo malunga nokungafuni ukunikezela umsebenzi ngokufanelekileyo kodwa. Umdlali weqonga wazisile I-BBC Ngo-2017, andifuni mntu wumbi oza kudlala i-Emperor Palpatine. Kudliwanondlebe olufanayo, wongeze ukuba kuthathe iiyure ezi-4 kwisitulo sokwenza izinto ukumlungiselela umboniso wokuBuya kweJedi.
Abanye abadlali abaye bavakalisa uPalpatine kwi-Star Wars media bayamkela Sam umfelwa kwaye UTim Curry .
I-palpatine edlalwa ngumfazi
Facebook Twitter IPinterest WhatsApp I-ReddIt
Inqaku langaphambiliUkuphononongwa: UDemi Lovato ujika ukubuyisela kwiMidlalo yeTheatre kwiAlbhamu eNtshaInqaku elilandelayoI-Armie Hammer iphuma eBroadway Dlala 'Imizuzu'UJohn Panchkula
Nceda ufake uluvo lwakho! Nceda ngenisa igama lakho apha Ufake idilesi ye-imeyile engeyiyo! Nceda ufake idilesi yemeyile yakho apha
Gcina igama lam, i-imeyile, kunye newebhusayithi kule bhrawuza kwixesha elizayo xa ndiza kuphawula.
Izigaba: Amazon-Prime Tech-Iindaba Hulu
Ngaba joey birlem isitabane
I-daisy marquez net efanelekileyo
paul greene unyana oliver mama
I-peyton yomntu obambe imask
I-misha collins inexabiso elifanelekileyo